Codsiyada Macallimiinta Macallimiinta Qaranka loogu diraayo dibadda | RayHaber | raillynews
HomeGUUDMEB Abroad ayaa la soo diri doonaa
18 / 07 / 2017 GUUD, Headline, TURKEY
Wasaaradda Waxbarashada Qaranka ee Waxbarashada waxaa loo diri doonaa dibadda: Wasaaradda Waxbarashada Qaranka ayaa macallimiinta dibedda ku dhigi doonta. Codsiyada xulashada macalimiinta loo xilsaaray dibadda ee loogu talagalay waxbarashada luqadaha ajnabiga ee bilaashka ah ayaa bilaabay.
Wasaaradda Waxbarashada Qaranka waxay u diri doontaa macallimiinta dibadda si ay u bartaan Ingiriisiga. Araajida waxaa loo diri doonaa dibadda si ay u bartaan casharo af Ingiriisi ah iyo macalimiin sheybaar ah sida ku cad tilmaanta arjiga 17 July 2017 taariikhda bilaabatay. Macnaha guud, macalimiinta 70 ayaa loo qoondeeyey dibadda si ay u bartaan Ingiriisiga.
Shuruudaha codsiga waxaa lagu sheegay inay ka shaqeynayaan Wasaaradda Waxbarashada Qaranka oo ah shaqaale joogta ah, iyo sidoo kale inay ka shaqeynayeen fasallada adeegyada waxbarashada ugu yaraan sanado 3. Iskuullada iyo hay'adaha ku xiran Agaasimaha Guud ee Waxbarashada Farsamada iyo Farsamada, kuwa ka shaqeeya bii'ada, waax, aqoon isweydaarsi, madaxa sheybaadhka ama aqoon-isweydaarsiga, macallinka sheybaarka ayaa codsan kara.
Codsiyada macalimiinta qandaraaska, maamulayaasha iyo maareeyayaasha ayaa la aqbali doono. Intaa waxaa dheer, da'da 45 waa in aaney dhalin. Shuruudda YDS waxaa lagu qeexay in ay qaadatay ugu yaraan 50 ka YDS.
Wasaaradda Waxbarashada, Tiknoolajiyada macluumaadka, teknoolojiyadda macluumaadka, teknoolajiyadda qalabka korontada, teknoolojiyada korontada, teknoolajiyadaha korontada, farsamooyinka kiimikada, hoyga iyo adeegyada socdaalka, teknooloojiyada mashiinka, farsamooyinka birta, Macalinka 70 ee ka socda tiknoolajiyada tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo adeegyada cuntada iyo cabitaanka ayaa dibadda u diri doona.
Codsiyada macalimiinta loo diro dibadda waxaa laga helayaa 17 July iyo 28 July 2017. Musharrixiinta waxay diri doonaan dokumantiyada loo Codsadayaasha ka dib baaritaanka waraysiga ayaa la isticmaali doonaa. Riix faahfaahin dheeraad ah.
Ka dib MONE, TCDD ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in ay codsan doonto warbixin caafimaad
Antalya 3. Mashruuca Nidaamka Isgaadhsiinta Wajiga ayaa loo diri doonaa AYGM maalmaha soo socda
16 kun caruur ah ayaa loo diraa lacag la'aan
Codsiyada qorista shaqaale ee naafada ee TCDD ayaa bilaabmay Maanta
Guryaha iyo Adeegyada Safarka